Dingana 7 ho an'ny paikadim-barotra momba ny varotra Optimised | Martech Zone
Alatsinainy Desambra 2, 2013 Douglas Karr
Ity dia sary mahatalanjona avy amin'ny Intergage tamin'ny fiandohan'ity taona ity, Dingana 7 ho an'ny paikadin'ny votoaty voatsara. Ity dia fomba iray mitovy amin'ny fomba hanamboaran'ny talen'ny tetikadin'ny votoatiny, Lis Lisak, ny paikady mitohy ho an'ny mpanjifanay.
Torohevitra fanampiny roa: Voalohany, ataovy izay hamboarina tsara ny rafitry ny fitantanana ny atiny mba hahafahan'ny motera fikarohana mamaritra izay valin'ny fikarohana tokony haseho ny atiny. Faharoa, hovako ny Digg ao amin'ny fomba fampiroboroboana ny StumbleUpon!
Tags: Content Marketingfanatsarana ny atinyfanatsarana ny atiny